Shiinaha SPORT MEDALS warshad iyo soosaarayaasha | Kingtai
Qaybaha kor ku xusan waxay soo bandhigaan xulkeenna hogaaminta xulashada billadaha isboortiga iyo naqshadaha madadaalada. Dabcan, waxaan leenahay isboorti caan ah sida baseball, basketball, kubbadda cagta iyo kubbadda cagta, laakiin sidoo kale waxaan haynaa billado loogu talagalay baaskiil wadista, xayndaabka, karinta iyo howlaha kale. Waxaan xitaa leenahay bilado guud, sida billadaha nalalka tooska ah ee Olimbikada, oo loo isticmaali karo dhacdooyin kasta.
Biladaha isboortiga waxaa ka mid ah xargaha qoorta. Xaaladaha qaarkood xargaha ayaa ah casaan, cadaan iyo buluug, laakiin bilado badan ayaa sidoo kale la yimaada xulashadaada midabka xargaha si ay ula mid noqdaan midabada iskuulkaaga ama kooxda isboortiga.
Biladaha waxaa lagu heli karaa cabirro badan, laga bilaabo 1 1/4 ″ dhexroor ah ilaa 3 ″. Qaar badan ayaa laga heli karaa midab ahaan ama dahab, qalin ama naxaas lagu dhameeyay.
Biladaha bilaa xardhashada ayaa sida caadiga ah markab kaliya 1-2 maalmood oo shaqo ah, iyo xardho, 4-6 maalmood oo shaqo ah. Biladaha abaalmarinta isboortiga waxay u qalmaan maraakiibta dhulka ee bilaashka ah amarrada ka badan $ 100.
Waxaan haynaa MEDALS badan oo laxiriira isboortiga iyo nashqadeynta madadaalada.
Dabcan, waxaan leenahay isboorti caan ah sida baseball, basketball, kubada cagta iyo kubada cagta, iyo sidoo kale MEDALS oo loogu talagalay baaskiil wadida, xayndaabka, karinta iyo howlaha kale.
Shirkaddeenu waxay kaloo soo saartaa MEDALS ujeedo guud ah, sida billadaha tooshka loo yaqaan ee Olombikada loo yaqaan, oo loo adeegsan karo ku dhowaad dhacdo kasta.
Isboortiga MEDALS waxaa ka mid ah silsilado.
Xaaladaha qaarkood, xargaha ayaa ah casaan, cadaan, iyo buluug, laakiin MEDALS badan ayaa waliba leh midabka xargaha ee aad dooratay oo u dhigma midabka dugsigaaga ama kooxda isboortiga.
Haddii aad ubaahantahay inaad astaamaysato astaanta, sidoo kale waanu kuu naqshadeyn karnaa, waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah oo naqshadeeyayaal ah
Hore: Tartanka CAGTA
Xiga: Shaashad Daabac pinel pinel